Ilhaan Cumar: Kurdiyiinta waxay xaq u leeyihiin in ay noolaadaan |
Ilhan Cumar oo su’aalo adag weydiisay wakiilka Mareykanka u qaabilsan arrimaha Suuriya iyo ururka Daacish waxay tiri: “Waa in aan joojino hubeynta iyo taageeridda maamulada aan naxariista lahayn, waana inaan eegno shuruucdeena dibadda ee meelaha anan u adeegsanayn nolosha iyo bini-aadamka dhibban”, ayey tiri iyadoo ka hadleysay duullaanka Turkiga ee Suuriya.
Laba isbuuc ka hor, Turkiga ayaa billaabay duullaan uu kaga gudbay xuduudda Suuriya si ay u sameeyaan “aag nabad ah” oo laga sifeeyay malleeshiyaadka Kurdiyiinta ee loo kala yaaano SDF iyo YPG.
“Ficillada” Turkiga “waa kuwo aan la difaaci karin”, ayey hadalka ku sii dartay Ilhaan Cumar.
“Waan baareynaa eedeynta la soo jeediyay ee ah isticmaalka kiimikada. Waana in aan eegno xaaladaha sababay”, ayuu yiri Jeffrey.
“Ilhaan oo ka falcelisay hadalkaas waxay tiri: “Waxaan jeclaan lahaa in adinkoo badan aad fikir toos ah ka dhiibataan warqaddaas. Waxayna ila tahay in ay sax tahay in warqaddaas lagu tilmaamo mid ceeb ku ahayd Mareykanka”.
Warqaddii Trump ee “qashin-qubka lagu daray”
Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan ayaa warqadda Donald Trump “ku dhex riday qashinka”, ka dib markii la gaarsiiyay, sida BBC loo xaqiijiyay.